Nhau - Iyo inoshanda musimboti yesando yemagetsi uye zvinhu zvinoda kutariswa mukushandiswa
Chiedza Hammer Drill
Iyo inoshanda musimboti yemagetsi sando uye zvinhu zvinoda kutariswa mukushandiswa
Iyo nyundo yemagetsi inoshanda sei
Sando yemagetsi rudzi rwemagetsi ekuboora, anonyanya kushandiswa kuchera mukongiri, pasi, rusvingo rwezvidhina nedombo, sando yemagetsi inoshanda-yakawanda inogona kuenzaniswa neicho chakakodzera chibooreso nechikomba, sando, sando yekuboora, foshoro uye zvimwe zvinangwa zvakasiyana-siyana. .
Iyo sando yemagetsi inotyairwa neiyo yekufambisa michina pisitoni mune cylinder inodzosera yakadzvanywa mweya, humburumbira mweya kumanikidza kutenderera shanduko inofambisa iyo cylinder mune nyundo inodzosera kurova kumusoro kwechidhinha, sekunge isu tinorova chidhinha nenyundo.
Pamusoro peyo nyundo yemagetsi senge yemagetsi yekuboora kutenderera uye mashandiro ekufamba uye kumashure kufamba, kazhinji nyundo yemagetsi ine mashandiro eiyo yemagetsi chibooreso, uye imwe nyundo yemagetsi inonziwo iyo inobata magetsi emagetsi. Iyo sando yemagetsi inokodzera dhayamita yakakura senge 30MM kana zvimwe.
Kushanda musimboti: musimboti wemagetsi sando ndeyekuti iko kufambisa mashandiro anotyaira chibooreso kuita kutenderera kufamba, uye kune mafambiro anoenderana kune iwo anotenderera musoro wekudzosera sando kufamba. Iyo nyundo yemagetsi inotyairwa neiyo yekufambisa michina pisitoni mune humburumbira inodzosera yakadzvanywa mweya, humburumbira mweya kumanikidza kutenderera shanduko inofambisa iyo cylinder mune nyundo inodzorera pamusoro penzvimbo yezvidhinha, sekunge sekunge isu tinorova chidhinha nenyundo, saka zita rekuti iyo Brushless yemagetsi sando!
Kudzivirirwa pachako kana uchishandisa sando
1. Vashandisi vanofanira kupfeka magirazi ekudzivirira maziso avo. Kana vachishanda vakatarisana, vanofanirwa kupfeka masiki ekudzivirira.
2, iko kushanda kwenguva refu kwenhare yakanaka nzeve, kuitira kuti kudzikise ruzha.
3. Mushure mekushanda kwenguva refu, chibooreso chiri munzvimbo inopisa. Paunenge uchitsiva iyo, kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kune rinopisa ganda.
4, iko kuvhiya kunofanirwa kushandisa mubato wepadivi, mashandiro emaoko ese, kuvharidzira simba rinodzosera kumashure ruoko.
5, yakamira pamanera kana rakakwirira basa rinofanira kuita matanho akakwirira ekudonha, manera anofanira kunge ari pasi pevatsigiri vevashandi.
Kuchengetedza kwekushandisa sando
1. Simbisa kana magetsi akabatanidzwa pane ino saiti anoenderana nezita rezita renyundo yemagetsi. Kunyangwe paine leakage dziviriro.
2. Drill bit uye gripper inofanirwa kuenderana uye kuiswa zvakanaka.
3. Pakuchera madziro, siringi nepasi, tinofanirwa kutanga tasimbisa kuti pane tambo dzakavigwa here kana pombi.
4, pakukwirira kwekuvhiya, kunyatso teerera kune zvinotevera zvinhu uye kuchengetedzeka kwevanofamba netsoka, pazvinenge zvakakodzera kumisikidza zviratidzo zvekunyevera.
5. Simbisa kana switch pane sando yakatemwa. Kana switch yemagetsi yashandurwa, chishandiso chemagetsi chinotendeuka zvisingatarisirike nekukasira kana plug yacho yaiswa musoketi yemagetsi, izvo zvinogona kukonzera njodzi yekukuvara.
6. Kana nzvimbo yekushandira iri kure nemagetsi uye tambo ichidikanwa kuti iwedzerwe, tambo yekuwedzeredza ine huwandu hwakakwana uye kuiswa kwakakodzera kunofanirwa kushandiswa. Kana iyo tambo yakawedzerwa ikapfuura nemukoto wevanofamba, inofanirwa kukwidziridzwa kana matanho anotorwa ekudzivirira tambo kuti isapwanywa nekukuvara.
Yakarurama mashandiro nzira yemagetsi sando
1, "kuchera zvine simba" mashandiro
(1) dhonza iyo inoshanda mode knob kune chinzvimbo cheyakaitika rotary gomba.
(2) isa chibooreso munzvimbo yekuboora, uye wozoburitsa kumabvazuva switch trigger. Chibhorani chinongosundwa zvishoma, kuitira kuti chip igone kuburitswa zvakasununguka, pasina kuomesa kusunda.
2, "chisel, kupwanya" mashandiro
(1) Dhonza iyo inoshanda mode knob kune chinzvimbo che "imwechete sando".
(2) kushandiswa kwehuremu hwakafa hweiyo yekuchera rig yekushanda, haidi kumanikidza kumanikidza.
3. "Drilling" mashandiro
(1) Bvisa iyo knobho yekushandisa kune iyo "kuchera" (hapana sando) chinzvimbo.
(2) Isa chibooreso pachinzvimbo chekuboorwa, uye wozokwevera switch switch. Ingoipa nudge.
Iko kushandiswa kwechinhu chisina kujeka kana chakakombama kunoguma nekusajairika mota kuwandisa pamusoro pemamiriro uye kudzikisira kushanda kwekushanda, saka kana mamiriro akadaro akawanikwa, anofanirwa kuchinjirwa nekukasira.
Yekusimbisa sikuruu kuongorora kwesando muviri
Nekuda kwekukanganisa kunokonzerwa nekushanda kwesando yemagetsi, iyo yekumusoro sikuruu yemagetsi sando fuselage iri nyore kusununguka. Iyo yekusunga mamiriro inofanira kuongororwa kazhinji. Kana iyo sikuru iri yakasununguka, inofanira kusimbiswa zvakare nekukasira, zvikasadaro inotungamira mukundikana kwesando yemagetsi.
Tarisa bharashi kabhoni
Iyo kabhoni brashi pamotokari inoshandiswa, kana dhigirii yekupfeka ikapfuura muganho, mota ikatadza, nokudaro, rakapfekwa kabhoni bhurashi rinofanira kutsiviwa nekukasira, kuwedzera kune kabhoni brashi rinofanira kugara rakachena.
Tarisa waya unodzivirira
Kudzivirirwa kwetambo yekumisikidza chiero chakakosha kuchengetedza kuchengetedzeka kwemunhu, saka Ⅰ michina yemhando (yesimbi ganda) inofanira kugara ichiongororwa goko rayo rinofanira kunge rakadzika zvakanaka.
Brush isina nyundo yemagetsi
Anoshanda musimboti wemagetsi sando ...
Iyo 129th Session yeCanton Fair chirongwa ...
Kuongorora pane Yazvino Mamiriro uye Kukudziridza ...
Kwete 69 Xiangnv Road, chengjiang Street, huangyan, taizhou
Tidaidze Iye Zvino: 0086-576-84030668